Global Voices teny Malagasy » Shina: Miteraka Tsikera Ilay Areti-Mifindra EV71. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Marsa 2018 5:13 GMT 1	 · Mpanoratra George Sun Nandika Ntsoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahasalamàna, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Tanora, Vaovao Mafana, Voina
Na tsy misy ifandraisany amin'ny gripan'ny vorona aza, ny fiparitahan'ny HFMD  (Hand Foot and Mouth Disease – fièvre aphteuse ) vao haingana ao Shina dia manome tombony antsika hijery ny fomba famalian'ny governemanta Shinoa manoloana ny valanaretina iray. Nandritra ny faran'ny herinandro, nandefa fanairana nasionaly i Shina mba hifehezana ilay aretina satria niparitaka tany amin'ny faritra maro hafa ao Shina koa izy io. Na izany aza, tsy nisy afaka mahita ny fiafaran'io fanaintainana io isika izay mitombo isanandro vaky. Zarain'i Chenguang  [zh], bilaogera, ny heviny amin’ny alalan’ny fanoharana azy io amin’ny valanaretina SARS tamin'ny taona 2003.
Lazain'ny blaogera Lelelele  [zh] fa betsaka ny fanahiana izay mety hipongatra avy amin'ireo olan'ny fifindran'ny EV71 amin'ny daholobe.
Heverin'ilay blaogera Anglisy, FLA_MEDIC  fa tsy tomombana ny rafitra ara-pahasalamana sy ara-pahadiovana ao Shina.
Miteny mihitsy aza ilay blaogera Yin Minhong  fa tokony hametra-pialana ny Praiminisitra Wen Jiabao raha tsy vitan'ny governemanta ny mifehy ny fihanaky ny aretina .
Tafakatra ho 11.905 ny trangan'ny aretin'ny fièvre aphteuse  (HFMD) tany Shina tamin'ity taona ity, tamin'ny alatsinainy 5 May 2008, ka nahafaty olona 26, araka ny filazan'i Xinhua an'ireo tarehimarika ofisialy. Tang Xiaoping, manampahaizana manokana momba ny areti-mifindra no sady tale lefitry ny biraon'ny sampan-draharahan'ny fahasalamana ao Guangzhou dia nilaza fa vokatry ny baikon'ny Minisitry ny Fahasalamana tamin'ny zoma ilay fitomboany haingana, baiko izay manasokajy ny HFMD ho anisan’ny areti-mifindra sokajy C tsy maintsy anaovana tatitra any amin’ny ministera.
Mpanoratra iray tsy mitonona anarana  no namoaka teny vitsivitsy milaza fa ny fiparitahan'ny EV71 dia maneho olana sosialy anatiny sy goavana kokoa ao Shina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/04/115163/
 ny fiparitahan'ny HFMD: http://www.healthhype.com/enterovirus-71-ev71-caused-26-children%E2%80%99s-deaths-in-china.html
 fièvre aphteuse: http://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/17855-fievre-aphteuse-definition
 SARS : https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-sars-cov-7956/
 Yin Minhong: http://forums.thestranger.com/showthread.php?p=70806#post70806
 Mpanoratra iray tsy mitonona anarana: http://crofsblogs.typepad.com/h5n1/2008/05/ev71-spreads-ra.html